> Resource> Android> Olee naghachi ehichapụ Photos si Motorola Xoom
Mkpa naghachi foto site na Motorola Xoom2 mbadamba?
Ndi onye ọ bụla mara otú naghachi ehichapụ foto site na m Motorola Xoom2 mbadamba? E nwere tọn eserese nke agbamakwụkwọ anyị na kaadị ebe nchekwa onwem na m mbadamba. M mkpa n'ezie iji nweta ha azụ. Ọ bụla ndụmọdụ na a ga-kpọrọ ihe.
Ndị foto agbamakwụkwọ ga-abụ nnọọ oké ọnụ ahịa n'anya gị. Ọ bụ na unu na-echeta na nkwado ndabere na mpaghara ha mbụ mgbe agbapụ pụrụ iche na mkpa foto ma ọ bụ vidiyo oge ọzọ. Mma ga-mgbe na-abịa azụ. Ọfọn, atụla emechu ihu. Ọ bụrụ na ị na mgbe eji gị mbadamba na kaadị ebe nchekwa n'ime na-ọhụrụ foto ma ọ bụ vidiyo, wee mee ka ọ ọma mgbe nhichapụ, ị ka nwere ike naputa ha niile si gị mbadamba. Na-agụ na-esi nkọwa maka ngwọta.
Naghachi ehichapụ foto site na Motorola Xoom mbadamba
Tupu eme ihe ọ bụla ọzọ, na-a Motorola Xoom foto mgbake ngwá ọrụ: Wondershare Photo Iweghachite, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac.
Ma nke foto mgbake omume na-pụrụ ịdabere na ọkachamara. Ị na-enwe iji ha ka ha naghachi ehichapụ foto ndị si Morola Xoom, nakwa dị ka naghachi video na ọdịyo faịlụ, n'agbanyeghị ma ị ehichapụ, furu efu, Ị ha niile n'ihi mis-arụmọrụ, kaadị ebe nchekwa emerụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Iji mezue mgbake, ihe niile ị chọrọ ime bụ ịrụ 3 nzọụkwụ. Ka-eje ije gị site ya ebe a ugbu a.
Download free ikpe mbipute a Motorola amakwa foto mgbake software ugbu a. Họrọ version ị chọrọ ka gị na kọmputa.
Step1. Gbaa ndị Motorola Xoom foto mgbake omume
Na-agba ọsọ usoro ihe omume ị ga-enweta bụ isi interface dị ka ndị na. Pịa "Malite" na-amalite Motorola Xoom foto mgbake. Tupu ị na-amalite, jide n'aka na ị na-na na ejikọrọ kaadị ebe nchekwa gị ma ọ bụ mbadamba gị na kọmputa ọma.
Step2. Ike iṅomi furu efu faịlụ gị Motorola Xoom
Ebe a, gị mbadamba ga-gosiri dị ka a mbanye akwụkwọ ozi (ebe a bụ "m"), họrọ ya na pịa "iṅomi" na-chọpụta niile furu efu faịlụ gị Motorola Xoom mbadamba.
Step3. Iṅomi ma naghachi ehichapụ foto ndị si Motorola Xoom
Mgbe previu, dum recoverable faịlụ na-hụrụ na-egosi na edemede dị ka audio, foto na vidiyo. Tupu naghachi, ị na-enwe ike ihuchalu foto niile si otu mgbe ọzọ iji gosi ndị nke dị gị mkpa. Mgbe ahụ ego na-agbake ha na otu Pịa.
Cheta na: Cheta ghara echekwa recovere faịlụ gị Motorola Xoom ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa. Chọta ọzọ ịzọpụta ụzọ n'ihi na ọ dị ka na PC gị na ọ bụ ndị ọzọ disk, n'okpuru echiche nke nchekwa nchegbu.
Video nkuzi nke Motorola Xoom foto mgbake
Olee otú Naghachi ehichapụ Pictures si Motorola amakwa
Olee otú Jiri Samsung Kies imelite Samsung Smartphones